I-Semalt: Amathiphu we-WordPress Plugin
Dan Whitney, Jr.
Kwezinye izimo, isiqalo se-WordPress singadinga ukwengeza ukusebenza okwengeziwe kwiwebhusayithi yabo. Ama-Plugin afika namafayela we-PHP afaka izici ku-theme yakho ye-WordPress ngaphandle kokushintsha ikhodi yewebhu jikelele. Ngokungafani nama-plugin ajwayelekile, i-plugin-Site ecacile ye-WordPress izogcina ama-shortcodes akho ngisho nalapho ushintsha isihloko sakho. Kulesi simo, kungase kudingeke ukuthi udale ipulagin yangokwezifiso ukusebenzisa igama lakho le-website ye-press. Imikhombandlela eminingi ye-inthanethi ayichazi indlela yokudala i-plugin ye-WordPress eqondene nesayithi.
Kulesi sihloko, esinikezwe ngu-Andrew Dyhan, oyisibonelo esihamba phambili Semalt , uzofunda indlela yokudala i-plugin yakho ye-PHP. Uzokwazi futhi ukudala isitayela esingangezela ngokwezifiso noma ezimbili kuwebhusayithi yakho ye-WordPress.
Iyini i-plugin ye-WordPress eqondene nesayithi
I-plugin ye-Site-Specific ye-WordPress yakha ipulatifomu ofaka ngayo ama-snippets ahlobene non-theme. Kwezinye izimo, ungase ukhubeke ezinkambisweni eziningi 'zendlela' zewebhusayithi yakho ye-WordPress. Iningi lalezi zindlela zibandakanya ama-snippets angokweziko okungenzeka ukuthi kungenjalo ama-plugin. Ngalolu lwazi, ungakwazi ukufaka le mibhalo kumfayela wakho we-works.php ukuze uthole le miphumela. Lezi zinguqulo zithembele ekusimeni kwethemu yakho yamanje. Ume ukulahlekelwa zonke izinguquko uma ulungisa isihloko, shintsha isihloko sakho noma uguqule eminye yemisebenzi yayo. Noma kunjalo, i-plugin eqondene nesayithi igcina zonke lezi zinguquko uma wenza izinguquko.
Izizathu zokusebenzisa i-plugin ye-WordPress ye-Site ethize
Ama-plugin we-WordPress aqondene neSayithi agcina izinguquko ezinkulu uma uguqula izingxenye ezinkulu zewebhusayithi yakho. Ngaphezu kwalokho, ungafaka izici ezingathembeki esihlokweni sakho njengokusebenzisa uhlobo lwama-Custom Post, Ukwengeza Ukusekelwa kwe-WordPress Isithonjana, Ukwengeza ama-Shortcodes, noma Ukuqondisa kabusha izivakashi ku-I-Random Post.
Kusukela ezidingweni ezingenhla, udinga i-plugin noma amakhodi agcina izilungiselelo ngisho nalapho ushintsha isihloko sakho. Iningi lezindlela ezivamile zokusebenzisa ama-shortcode angokwesikhashana. Kwezinye izimo, ungadinga ukugcina wonke amakhodi wakho kusayithi lakho, ukuletha ukusetshenziswa kwe-plugin-Site Specific WordPress.
Kwamanye amacala, ama-snippets angabangela ukuhluleka kwiwebhusayithi ye-WordPress. Isibonelo, ama-newbies anganamathisela isichazamazwi ku-WordPress ngokusebenzisa ukufometha okungalungile. Lephutha lingabangela isikrini esimhlophe sokufa, isimo esingabangela ukulahlekelwa isayithi lonke noma izinguquko ezingalondoloziwe. Kwezinye izimo, abasebenzisi bahlela ama-snippets abo besebenzisa i-BackPress backend. I-Plugin ye-WordPress eqondene neSayithi iyindlela evikelekile yokuzama amaqhinga amasha.
Ukudala i-Plugin ye-WordPress eqondene neSayithi
Lena inqubo eqondile. Udinga ukwakha ifolda entsha ku-WP website yakho plugins directory. Isibonelo: / wp-okuqukethwe / plugin / eyakho-plugin /
Kule ndawo, yakha ifolda bese wengeza ifayela le-PHP kuso. Qiniseka ukuthi usebenzisa igama elifanayo lefayela legama lefolda. Ngokwesibonelo, i-plugin elula, ungasebenzisa ikhodi:
: I-Plugin yeSayithi ye-thisexample.com
Incazelo: Ikhodi ethize ye-Site ishintshela i-thisexample.com
/ * Qala Ukwengeza Imisebenzi Ngaphansi Kwale Mgwaqo * /
/ * Yeka Ukufaka Imisebenzi Ngaphansi Kwale Mgwaqo * /
Ungabe ulayishe futhi ulondoloze le plugin kwisiqondisi sakho kuDashibhodi ye-WordPress. Khumbula ukuvula i-plugin.